Warar - Huiyu Fluid Attended Analytica 2018 In Munich Germany
Huiyu dareeraha wuxuu kaqeyb galay Analytica 2018 magaalada Munich Jarmalka. Huiyu's waab, B1.528-6 #, Bambooyinkeena tayada wax ku oolka ah ayaa soo jiita boqolaal xirfadlayaal ah.
Ku saabsan Analytica
Dunida hormoodka ka ah cadaaladda ganacsiga waxay ahayd dammaanad qaadkaaga inaad si guul leh u soo bandhigto tiknoolajiyada cusub ee shaybaarka iyo bayotechnoolajiyada mustaqbalka u janjeera muddo ku dhow 50 sano. Waa isu-imaatinka warshadaha ugu muhiimsan wuxuuna isu keenayaa dhammaan mawduucyada khuseeya shaybaarada cilmi-baarista iyo warshadaha.
Isu imaatinka warshadaha aduunka ugu weyn — Carwada ganacsiga caalamiga ah
analytica waa suuqa ugu horreeya adduunka ee wax soo saarka iyo adeegyada dhammaan silsiladda qiimaha ee hababka shaybaarka casriga ah. Waa halka ay ku kulmaan ciyaartooyda muhiimka ah ee warshadaha iyo kuwa go’aanka gaara.
Dhamaan soo bandhigayaasha analytica 2020
Qaybaha bandhig-dhismeedka habaysan - Muuqaalka oo dhameystiran
Keliya analytica waxay ku siinaysaa aragti guud oo ku saabsan dhammaan mawduucyada khuseeya shaybaarka cilmi-baarista iyo warshadaha.
● Falanqaynta iyo xakamaynta tayada
Bayoolaji, Sayniska Nolosha iyo baaritaanka cudurka
Technology Teknolojiyada sheybaarka
Khibrad aad u urursan — shirkii falanqaynta
Shirka seddex maalmood ee analytica waa wadnaha sayniska ee analytica. Khubaro caan ah ayaa ka warbixinaya heerka ay hadda marayaan hal-abuurnimada caalamiga ahi. Ka faa'iideysi wadahadal dhiirrigelin leh aqoonyahanno caan ah oo adduunka oo dhan laga yaqaan.
Si toos ah ugu gudbinta aqoonta ficil ahaan - barnaamijka falanqaynta falanqaynta ee falanqaynta
● analytica barnaamijkeeda ku wajahan ku-dhaqanka ee dhacdooyinka la xiriira wuxuu ku saabsan yahay wareejinta aqoonta, talooyinka ugu-dhaqanka wanaagsan iyo is-weydaarsiga tooska ah ee fikradaha iyo macluumaadka.
Shaybaarkayaga tooska ah waxay soo bandhigaan farsamooyin codsi cusub iyo nidaamyo qalab oo jawi shaybaar oo xiiso leh oo dhab ah.
Ka faa'iideyso kulammada ku saabsan mowduucyada gaarka ah si aad ula dooddo khubaro caalami ah iyo saaxiibbadaa.
End Ka qeybgal bandhigyadayada gaarka ah mowduucyada kulul sida "Badbaadada Shaqada / Caafimaadka iyo Badbaadada Goobta Shaqada".
Of Barnaamijka dhacdooyinka la xiriira waxaa lagu soo koobay maalmo mowduucyo gaar ah sida "analytica Job Day" iyo "Maalinta Maaliyadda" iyo dhacdooyin kale oo qiimo leh.